CNC michina: gwara pane nhamba kutonga | hardware yemahara
Isaac | 15/04/2022 09:00 | Cnc
ari CNC michina yakapinda akawanda maindasitiri zvikamu uye mashopu emarudzi ese, uye munguva pfupi yapfuura zvakare mune imwe yemhando dzayo dzinovimbisa: 3D printers. Nekuda kwazviri, zviwanikwa zvinogona kushandwa nenzira dzakawanda, nekunyatso kurongeka, nekukasira, uye nemhedzisiro inonetsa kuwana nemanyorero maitiro. Aya angori mamwe ezvakanaka zveaya masisitimu atichatsanangura pano.
1 Chii chinonzi CNC
2 Chii chinonzi CNC michina uye inoshanda sei?
2.2 Chii chinonzi CNC muchina wakagadzirwa?
2.2.1 Inset mudziyo
2.2.2 Control unit kana controller
2.2.4 Kutsanya kana kutsigira system
2.2.5 Feedback zvishandiso (servomotors)
2.2.7 Zvimwe zvikamu
Chii chinonzi CNC
CNC (Computerized Numerical Control), kana Computer Numerical Control muChirungu, Iyo yakapararira sisitimu muinjiniya kugadzirisa zvinhu uye zvikamu zvine kupindira kudiki kwevanhu. Iyo CNC tekinoroji inotorwa kubva kunhamba kutonga, otomatiki sisitimu yezvishandiso zvemuchina zvinoshandiswa nenzira yemirairo kuburikidza nemavhiri emaoko kana lever. Nekudaro, michina iyi yakashanduka uye ikozvino inobvumira kutonga kwavo kuburikidza nesoftware uye komputa kuitira kuti ienderere mberi neotomatiki maitiro uye kupa kuita kuri nani.
Kushanda kweaya CNC masisitimu kuri nyore kunzwisisa. Inobva pakugadzirisa kwechikamu kuburikidza nekushandiswa kwe macoordinates anozotsanangura mafambiro echombo (kucheka, kuchera, kugaya, welding...). Zvakafanana nekushanda kweprinta ye3D, iyo inogonawo kunzwisiswa seCNC muchina, chete pachinzvimbo chekugadzira, zvainoita kuwedzera zvidimbu zvezvinhu kuvaka chikamu.
Uye semaprinta e3D, unogona kuve nematemo akawanda, senge X, Y uye Z, kukwanisa kuita longitudinal, vertical and transverse displacements zvichiteerana. Kuburikidza nevamwe servomotors uye / kana and injini, mudziyo uchaendeswa kunzvimbo chaiyo inoratidzwa nekombiyuta software, uye machining achaitwa nokukurumidza uye nepamusoro-soro.
Pamberi pekugadzirwa kweCNC, basa raidiwa kubata maturusi nemawoko, asi kutadza kwavangaite kwaikanganisa kunaka, kudzokorora, mitengo uye kuderera kwekugadzirwa. Semuenzaniso, fungidzira mushandi ari muchitoro chearuminiyamu anoda kudhiraivha mafuremu ehwindo. Basa iri rinoda kuti:
Mushandi anotora chidimbu.
Isa patafura yebasa.
Isa bhiti rakakodzera muchibooreso.
Izvi kuita gomba rimwe chete harisi dambudziko, asi fungidzira kuti mazana kana zviuru zvaro zvinoda kuitwa kuchengetedza kugadzirwa kwakawanda uye munguva pfupi inobvira, mukuwedzera kune maburi ese akafanana. Kana zvakadaro, vashandi havana kukwana, uye ndiko kupi cnc michina zvakaunza budiriro huru kuindasitiri.Pakadai apa, matanho angave:
Ita shuwa kuti muchina uyu wakadyiswa nezvinhu (dzimwe nguva vangangove nekudyisa otomatiki).
Tanga nayo nehurongwa hunodiwa (zvingangove zvakafanira kamwe chete uye kuratidza nhamba yekudzokorora).
Uye iye achange achitarisira kugadzira maperforations nemazvo uye nekuadzokorora kakawanda sezvinodiwa, pasina chikonzero chekuti mushandisi apindire.
Uyewo, inogona kushanda nekukurumidza kupfuura mushandisi uye hainete, saka zvese zvakanakira indasitiri kana musangano.
Chii chinonzi CNC michina uye inoshanda sei?
Una CNC muchina imhando yemuchina wekugadzira unoshandiswa nekombuta nhamba yekudzora.. Nenzira iyi, maitiro otomatiki anowanikwa nekumisikidza chaiwo marongero ekucheka, kukwesha, kugaya, kuumba, kukuya, kuisa zvikamu, nezvimwe, zvemarudzi ese ezvigadzirwa, kubva kune zvinyoro semapolymer, foami, MDF, kana huni, kunyangwe. zvakaoma semarble, simbi, matombo, nezvimwe.
Saizvozvo, CNC michina inobvumira kune yakaomesesa sisitimu ye mhinduro inogara ichitarisa uye kugadzirisa kumhanya uye chinzvimbo chezvishandiso zvinoshandiswa pakugadzira, pasina kudikanwa kwekugara kwakadaro kwekugadzirisa. Kunyangwe mamwe epamberi ane masisitimu akangwara ekuona matambudziko, kudzora kunaka kwebasa kana chikamu, nezvimwe, kana kubatanidzwa kana iri indasitiri 4.0.
Zvakakosha kuziva kuti mamwe CNC michina vanoshanda zvakasiyana:
point to point control: Murudzi urwu rwemichina yeCNC, yekutanga uye yekupedzisira mapoinzi enzira imwe neimwe ichamiswa.
paraxial control: mavari zvinokwanisika kudzora kukurumidza kufamba kwezvidimbu.
interpolate control: vanoita hunyanzvi munzira ipi neipi inofambirana nematemo avo.
Kunyangwe izvi zvisiri izvo mhando dze cnc michinaIsu tichavhara izvo zvakadzama mune ramangwana posts.
Kugadzira kwekutanga kwakatanga kuitwa kwaiva nemaoko zvachose, pachishandiswa marudzi akasiyana-siyana ematurusi echinyakare aifambiswa mberi zvishoma nezvishoma. Kubva kutanga kwezana ramakore rechiXNUMX.
Michina iyi yakanga isati yanyanya kusimuka vashandi, izvo zvakanga zvichiri kukosha zvikuru. Izvi zvaireva kuti kugadzira chikamu kwakatora nguva yakareba, kwaive nemitengo yakakwira uye mibairo yakaderera yepurofiti, uye kunaka uye nemazvo zvakawanikwa zvaive zvisina kuenderana muzvikamu zvese zvinogadzirwa.
En los 40's uye 50's, Michina yokudzora nhamba inotanga kugadzirwa muUnited States. John T. Parsons, injiniya panguva iyoyo, aizochinja muchina wokugayo panguva iyoyo kuti ugogona kudzorwa nezvinopinza zvinobva pamakadhi akabayiwa, mutangiri wendangariro namapurogiramu epurogiramu zvanhasi. Neiyi nzira, michina yakawana ruzivo nezve mafambiro chaiwo avaifanira kuita kuti muchina chikamu uye yaisada kupindira kwevanhu kwakawanda kuti iite ma levers, mavhiri ekufambisa, nezvimwe.
Muchina iwoyo weParsons waizova mumwe weiyo vakatangira nhasi CNC michina mazuvano. Asi waive uchiri muchina wekugaya une yemagetsi analog control system uchishandisa vacuum valves. Aya masisitimu akawedzera kufarirwa uye akafambiswa mberi nekukura kwesimba-nyika uye zvemagetsi zvedhijitari. Kubva pavacuum chubhu kuenda kune transistors, kubva kune transistors kuenda kune akadhindwa maseketi uyezve kune akabatanidzwa maseketi, kusvika mamicrocontrollers (MCUs) akachipa zvekuti anogona kushandiswa zvakanyanya.
Ipapo michina yeCNC yakazvarwa iine hungwaru uye inorongeka masisitimu, kuti ikwanise kusiyanisa machining maitiro sezvaunoda. Mu 70s Michina yeCNC yatinoziva nhasi yaizosvika, yakarairwa nekombuta. Nekuda kwechimwe chiitiko chikuru ichi, zvakagoneka kudzora maitiro ese zvakanyanya intuitively kubva kune software, kuronga zvirongwa zvakasiyana kuti uzvishandise pazvinenge zvichidiwa, shandura ma paramita nekukurumidza, nezvimwe.
Mumazuva edu, nekuvandudzwa kwegore, uye IoT (Internet yezvinhu), kana Indaneti yezvinhu, zvinokwanisika kubatanidza huwandu hwezvigadzirwa kune gore uye kuti vanogona kupindirana nenzira ine hungwaru kune imwe neimwe. zvimwe, kupa nzira kune a Indasitiri 4.0, umo CNC michina ichakwanisa kuvandudza kugona kwavo zvakanyanya. Semuenzaniso, vaigona kutaurirana muketani yekugadzira kuitira kuti kana chero muchina kana danho rikanonoka kana dambudziko, michina inotevera inogona kudzimwa pavanenge vakamirira kuchengetedza simba, kana kuti vanogona kuona kudiwa kwekugadzirisa chiyero chavo chekugadzira, nezvimwewo.
Chii chinonzi CNC muchina wakagadzirwa?
Kana zvasvika pakutsanangura iyo zvikamu kana zvikamu zve CNC muchina, zvinotevera zvakakosha zvinhu zvinogona kutaurwa:
Iyo inozivikanwa se mudziyo wekuisa kubva kumuchina weCNC kuenda kune iyo system inoshandiswa kukwanisa kurodha kana kugadzirisa iyo data kune machining process. Semuenzaniso, inogona kunge iri control panel, touch screen, nezvimwe. Ndokunge, interface yekubvumidza mushandisi wemuchina kumutsa uye kutonga muchina.
Control unit kana controller
Ndiyo digital electronic system iyo ichange iine basa rekududzira iyo yakapinda data uye kugadzira nhevedzano yekudzora masaini kudzora kufamba kweiyo servomotors kufambisa musoro webasa kuburikidza nematemo uye chishandiso kuitira kuti vaite chaizvo izvo chirongwa chakapinda nemushandisi chinoratidza.
La tool Icho chimwe chezvinhu zvakakosha zvikuru, sezvo chiri icho chinonyatsoita machining, iyo inosangana nechidimbu chiri kugadziriswa. Inogona kunge iri musoro wezvishandiso zvakawanda, uchikwanisa kuita akati wandei mabasa akasiyana, kana zvakare munhu akagadzika kana anochinjika maturusi. Semuenzaniso: drill bit, cutter, milling cutter, welding tip, nezvimwe.
Mukuwedzera, zvakakosha kuziva kuti panogona kunge paine marudzi akasiyana eCNC michina maererano neavo mhando uye nhamba yemaekisi:
3 axis: ndiwo anonyanya kuzivikanwa, ane X, Y, uye Z axis.
4 mbezo: semamwe marouters kana CNC routers anowedzera A axis kune matatu apfuura. Izvi zvinobvumira kuti spindle ifambe kubva kuruboshwe kuenda kurudyi kuti igadzirise nzvimbo nhatu panguva imwe chete, ichikwanisa kunyora sandara kana mu 3D. Iwo akanakira kuveza huni, simbi, mapatani akaoma, nezvimwe.
rotary axis- Iyo ine inotenderera inotenderera yechishandiso, iyo inokutendera kuti ugadzirise nzvimbo ina panguva imwe chete. Aya marudzi emakina anoshandiswa kugadzira cylindrical zvikamu, zvidhori zvemapuranga, yakaoma simbi zvinhu, nezvimwe.
Kutsanya kana kutsigira system
Ndiyo nzvimbo iyo chimedu chakasungirirwa kuita machining process pasina icho kufamba. Zvichienderana nehurongwa, inogona kunge iri yemhando dzakasiyana, ine kana isina anchors. Pamusoro pezvo, zvimwe zvinoda zvekuwedzera, senge masisitimu ekuunganidza guruva, kana kucheka kwejeti yemvura, izvo zvingada tangi yemvura kana dhiza rekuunganidza nekubvisa simba rejeti kana rapfuura nepakati.
Aya masisitimu anowanzo kunzi zvakare mubhedha kana tafura. Mazhinji acho anowanzo kugadzirwa nezvinhu zvakaita sealuminium, apo zvidimbu zvinoda kusungirirwa patafura, kugadzira masilinda kana maumbirwo akaomarara. Pane kudaro, mubhedha wevacuum kana tafura inotsvaira chikamu pasina kuisunga, ichibvumira chiyero chepamusoro chechokwadi, kushomeka kudiki panguva yekushandiswa, uye huwandu hukuru hwerusununguko.
Feedback zvishandiso (servomotors)
Kune marudzi aya emidziyo chete. mhinduro pamichina yeCNC vanoshandisa servo motors. Mune mamwe hazvidiwi.
Pamusoro pezvose zviri pamusoro, panogona kunge paine a ruzivo kana kuongorora system yekugadzira michina pachayo. Izvi zvinogona kuve kuburikidza neiyo yakafanana interface kubva kwairi kushanda kana yakazvimirira.
Mukuwedzera kune zviri pamusoro, zvinofanira kuonekwa zvinhu zviviri zvakakosha pamwe:
Motors: ndiwo maturusi anofambisa kana kumisa chishandiso chemuchina zvinoenderana nedata rakagamuchirwa kubva ku control unit.
Servo: inoshivirira kumhanya kwakanyanya, saka unogona kucheka, kuboora, nezvimwe. Yakanakira basa rakanyarara, rakagadzikana, uye nemaitiro akaomarara.
and: Aya ma stepper motors ane mutengo wakaderera asi anoshandiswa kune mamwe ekutanga engraving kana kufamba. Izvo zviri nyore kudzora, zvinovimbika uye zvakanyatsorurama, zvichiita kuti zvikodzere uko kunonyanya kudiwa kunodiwa.
spindle: Ichi chinhu chemuchina weCNC chinogona kuve nemhando mbiri dzekugonesa kutonhora kana kutonhora system:
Nemhepo: Iwo anotonhodzwa zviri nyore nefeni inotonhodza chirungiro, uye akachipa, ari nyore kuchengeta nekushandisa.
Nemvura: Vanoshandisa mvura pakutonhodza. Inodhura zvakanyanya, yakaoma kunzwisisa, uye yakaoma kuichengeta, asi inowanzotora nguva yakareba, inoshanda zvakanyanya, uye haina kunyarara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Cnc » CNC michina: gwara kune nhamba kutonga
Mosquito: zvese zvaunoda kuziva